သမိုင်းက ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်(နေ့သစ်ဝက်ဆိုက်မှာ ဖတ်လိုက်ရလို့ ရွာသားတွေကိုလည်းဖတ်စေချင်လို့ ကူးယူတင်ပြလိုက်ပါတယ်) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » သမိုင်းက ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်(နေ့သစ်ဝက်ဆိုက်မှာ ဖတ်လိုက်ရလို့ ရွာသားတွေကိုလည်းဖတ်စေချင်လို့ ကူးယူတင်ပြလိုက်ပါတယ်)
သမိုင်းက ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်(နေ့သစ်ဝက်ဆိုက်မှာ ဖတ်လိုက်ရလို့ ရွာသားတွေကိုလည်းဖတ်စေချင်လို့ ကူးယူတင်ပြလိုက်ပါတယ်)
Posted by chityimhtoo on Jan 21, 2012 in News |5comments
ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ပြောတဲ့မိန့်ခွန်း….
ခုလို နေ့သစ်ကနေ ကူးပြီးတင်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဒေါ်စုရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုထောက်ခံပါတယ်။ ကျမကဒေါ်စုကိုဘယ်မှာစပြီးကြိုက်သွားလဲဆိုရင် ဟိုကောင်ဘယ်သူလဲနာမည်တောင်မေ့နေပြီ။ဂျင်ဝက်လား..။ဒေါ်စုရဲ့အိမ်ထဲခိုးဝင်ပြီးဒေါ်စုကိုဒုက္ခတွေပေးခဲ့ထဲကပေါ့။ အဲဒီငနဲကဒေါ်စုအိမ်ထဲခိုးဝင်ပြီးရောဂါရသလိုလိုဘာလိုလိုလုပ်ပြီးတညနေခဲ့တာ၊ တကယ်ဆိုဒေါ်စုကသူ့ခြံရဲ့လုံခြုံရေးတွေကိုအကြောင်းကြားလို့ရမှာပါ။ဒါပေမဲ့အကြောင်းကြားလိုက်ရင်ဒီငနဲ
အဖမ်းခံရမှာစိုးလို့သူငြိမ်နေလိုက်တာ။အပြစ်ခံယူရစရာရှိရင်သူဘဲခံလိုက်တော့မယ်ဆိုပြီး…။အဲဒီလိုစိတ်ဓါတ်မျိုးကိုကြိုက်တာ။ သူ့ကြောင့်သူတပါးကိုအပြစ်မဖြစ်စေချင်တဲ့စိတ်ဓါတ်ပေါ့။ ကိုယ်ကတော့ဒါမျိုးကိုဗုဒ္ဒ(ဗုတ်ဒကိုမရေးတတ်ဘူး)ဘာသာရဲ့စိတ်ဓါတ်လို့ပြောချင်တာဘဲ။ အဲဒါကြောင့်လည်းစဉ်းတော့စဉ်းစားနေတာဘဲ။ ရွေးကောက်ပွဲကျရင်မြန်မာပြည်ပြန်ပြီးမဲပေးဘို့။ ဘယ်သူ့ကိုပေးမယ်ဆိုတာတော့မေးစရာတောင်မလိုဘူးထင်တယ်နော်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်။ ဒီမှာအဆင်မပြေလို့
မှန်ဒယ်ဗျို့.. ဂျင်ဝက်ဆိုတဲ့အကောင် ခိုးဝင်ပြီး ဒေါ်စုကို ဒုက္ခပေးခဲ့တာ တနေ့ကြရင် ဘယ်သူတွေကြံရပါဆိုတာ သိရလိမ့်မယ်။ ဒင်းကို ယက်ထောဆိုတဲ့ အမေရိကန် လွှတ်တော်အမတ် ပြန်လာကယ်ထုတ်သွားတာ ကျုပ်တော့ မသင်္ကာဘူး…။
James Henry “Jim” Webb, Jr. (born February 9, 1946) is the senior United States Senator from Virginia. He is also an author andaformer Secretary of the Navy. He isamember of the Democratic Party.
Webb was traveling to Naypyidaw in order to secure the release of John Yettaw,
Read more: http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1916722,00.html#ixzz1k90Vps59